Ukusebenza nefayile ye .htaccess kwiWordPress | Martech Zone
WordPress liqonga elihle elenziwa ukuba libengcono ngendlela eneenkcukacha kunye namandla wedeshibhodi ye-WordPress esemgangathweni. Ungafezekisa okuninzi, ngokokwenza indlela indawo yakho evakalelwa ngayo kunye nemisebenzi yayo, ngokusebenzisa nje izixhobo ezenzelwe ukuba zifumaneke kwiWordPress njengesiqhelo.
Kuza ixesha nakweyiphi na indawo yobomi bomnini wewebhusayithi, nangona kunjalo, xa kuya kufuneka uye ngaphaya koku kusebenza. Ukusebenza neWordPress htaccess ifayile inokuba yenye yeendlela zokwenza oku. Le fayile yifayile engundoqo exhomekeke kwindawo yakho, kwaye ikakhulu ichaphazeleka yindlela ezisebenza ngayo iiwebhusayithi zakho.
Ifayile .htaccess inokusetyenziselwa ukufezekisa inani lezinto eziluncedo, nangona. Sike sazigquma ezinye zazo, kubandakanya nenkqubo yokwenza i-regex iphinda iqondise kwakhona kwi-WordPress, kunye nokujonga ngokubanzi ngokubanzi Ukubuyisela kwakhona i-header kwiWordPress. Kuzo zombini ezi zikhokelo, sifikelele saza sahlela ifayile ye-.htaccess, kodwa ngaphandle kokuchaza okuninzi malunga nokuba kutheni le fayile ikwindawo yokuqala, kwaye ungayisebenzisa njani.
Yinjongo yeli nqaku. Kuqala, siza kujonga ukuba yintoni ifayile ye-.htaccess eyenzayo kuseto oluqhelekileyo lwe-WordPress. Emva koko, siza kuchaza ukuba ungayifumana njani, kunye nendlela onokuyihlela ngayo. Okokugqibela, siza kukubonisa ukuba kutheni ungafuna ukuyenza loo nto.
Yintoni iFayile .htaccess?
Masikhuphe iziseko zisendleleni kuqala. Ifayile .htaccess ayisiyongcali Ifayile yeWordPress. Okanye, ukuyibeka ngokuchanekileyo, ifayile ye .htaccess yifayile esetyenziswa ziiseva zewebhu ze-Apache. Le yinkqubo iyasetyenziswa ngoku ngobuninzi beendawo zeWordPress kunye nemikhosi. Ngenxa yobuninzi be-Apache xa kuziwa ekulawuleni iiWebhusayithi zeWordPress, indawo nganye enjalo inefayile .htaccess.
Ifayile ye-.htaccess yabelana ngeempawu kunye nezinye iifayile ezisebenzisa indawo yakho ye-WordPress ukulungiselela. Igama lefayile yifayile efihliweyo kwaye kuya kufuneka ingafihlwanga ukuze ihlelwe. Ikwahleli kwisikhombisi sengcambu kwindawo yakho yeWordPress.
Khumbula, ifayile ye-.htaccess yenza into enye kwaye inye kuphela: ibeka indlela eziboniswa ngayo ii-permalinks zesiza sakho. Yiyo leyo.
Efihliweyo emva kwale nkcazo ilula yinkimbinkimbi, nangona kunjalo. Kungenxa yokuba uninzi lwabanini besiza, iiplagi, kunye nemixholo yenza utshintsho kwindlela ekusetyenziswa ngayo iipalalinks kwindawo yakho yeWordPress. Ngalo lonke ixesha wena (okanye iplagi) usenza utshintsho kwindlela esebenza ngayo i-permalinks, olu tshintsho lugcinwa kwifayile .htaccess.
Ukufumana nokuHlela iFayile .htaccess
Ngaphandle kwento yokuba. amaphepha athile.
Kweli candelo, siza kukubonisa indlela yokwenza oko. Kodwa kuqala…
ISILUMKISO: Ukuhlela ifayile .htaccess kunokuyaphula iwebhusayithi yakho.
Ukwenza naluphi na utshintsho kwiifayile ezisisiseko eziqhutywa kwindawo yakho kuyingozi. Kufuneke u soloko ugcina indawo yakho ngaphambi kokwenza naluphi na utshintsho kuyo, kwaye ulinge ngaphandle kokuchaphazela indawo yokuhlala.
Ngapha koko, kukho isizathu esihle sokuba kutheni ifayile ye-.htaccess ingafumaneki kubasebenzisi abaninzi be-WordPress. I-WordPress inenani elicacileyo lezabelo zentengiso kwiiwebhusayithi zamashishini amancinci, kwaye oku kuthetha ukuba uninzi lwabasebenzisi babo, ngaba siya kuthi, ayizizo ezobuchwephesha. Kungenxa yoko le nto .htaccess ifihliwe ngokungagqibekanga-ukuthintela abasebenzisi be-novice abenza iimpazamo.
Ukufikelela kunye nokuHlela iFayile .htaccess
Ngaphandle kwayo yonke loo nto, makhe sijonge indlela onokufikelela ngayo kwifayile ye-.htaccess. Ukwenza oko:
Yenza unxibelelwano kwiwebhusayithi usebenzisa umxhasi we-FTP. Zininzi simahla, abathengi beFTP abakhulu phaya, kubandakanya FileZilla. Funda onke amaxwebhu abonelelweyo ukwenza uqhagamshelo lwe-FTP kwindawo yakho.
Nje ukuba umisele unxibelelwano lwe-FTP, uya kuboniswa zonke iifayile ezenza indawo yakho. Jonga ezi folda, kwaye uya kubona enye ebizwa ngokuba yingcambu yolawulo.
Ngaphakathi kule folda, uza kubona ifayile yakho .htaccess. Ngokwesiqhelo iya kuba kufutshane nomphezulu woluhlu lweefayile ezikule folda. Cofa kwifayile, emva koko ucofe ukujonga / ukuhlela.
Ifayile iya kuvulwa kumhleli wokubhaliweyo.
Kwaye kunjalo. Uvumelekile ngoku ukuba wenze utshintsho kwifayile yakho, kodwa qaphela ungaze ufune ukwenza njalo. Siza kukubonisa indlela yokusebenzisa le fayile kwicandelo elilandelayo, kodwa ngaphambi kokuba siyenze ingumbono olungileyo yenza ikopi yendawo yefayile yakho .htaccess (usebenzisa incoko yababini esemgangathweni "gcina njenge"), yenza utshintsho lwakho ekuhlaleni, emva koko ulayishe ifayile kwindawo ehleliweyo (njengoko kuchaziwe apha ngasentla).
Sebenzisa iFayile .htaccess
Ngoku ukulungele ukuqala ukusebenzisa ukusebenza okongezelelekileyo okubonelelwe yifayile ye-.htacess. Masiqale ngezimbalwa ezisisiseko.
I-301 iqondisa kwakhona -Ukuhanjiswa kwakhona okungama-301 sisiqwenga esincinci sekhowudi ethumela iindwendwe kwelinye iphepha ukuya kwelinye, kwaye kuyafuneka ukuba ugqithise iposti yebhlog ethile enxulunyaniswe nayo isiza sangaphandle. Ngenye indlela, ungasebenzisa ifayile ye .htaccess ukuhambisa kwakhona iwebhusayithi. Unokwalathisa iindwendwe kuhlobo lwakudala lwe-HTTP yesiza ukuya kwinguqulelo entsha nekhuselekileyo ye-HTTPS. Yongeza oku kwifayile .htacess:
ukhuseleko -Kukho neendlela ezininzi zokusebenzisa ifayile ye-.htaccess yokusebenzisa iindlela ezikhuselekileyo zokukhusela i-WP. Enye yezi kuku vala ukufikelela kwiifayile ezithile ukwenzela ukuba kuphela abasebenzisi abanokungqinisisa okuchanekileyo abanokufikelela kwiifayile eziphambili ezisebenza kwindawo yakho ye-WordPress. Ungayisebenzisa le khowudi, incanyathiselwe ukuphela kwefayile yakho .htaccess, ukunciphisa ukufikelela kwinani leefayile eziphambili:
Guqula ii-URL Enye into eluncedo kwifayile ye-.htaccess, nangona inzima ukuyenza, kukuba ifayile ingasetyenziselwa ukulawula indlela ii-URL eziboniswa ngayo xa iindwendwe zakho zingena kwindawo yakho. Ukwenza oko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba usebenzisa olona hlobo lutsha nje lwe-Apache. Oku kwenza i-URL yephepha elinye ibonakale yahlukile kubakhenkethi. Lo mzekelo wokugqibela- mhlawumbi -unzima kakhulu kubasebenzisi abaninzi ukuqheleka kwifayile ye-.htaccess. Nangona kunjalo, ndiyibandakanyile ukubonisa umda wento enokufikelelwa ngefayile. Faka oku kwifayile yakho .htaccess:
Ukuqhubela phambili nge .htaccess
Ukusebenza nefayile .htaccess yindlela elungileyo yokufunda malunga nokuba indawo yakho yeWordPress isebenza njani kwinqanaba elisisiseko, kunye nokukunika umbono wommandla omkhulu wokwenza ngokwezifiso nokuba indawo esemgangathweni yeWP ikunika yona. Nje ukuba ukwazi ukusebenza nefayile ye-.htaccess ngokwenza utshintsho olusisiseko esiluchaze ngasentla, ubutyebi bezinto onokukhetha kuzo buvula kuwe. Inye, njengoko besikhe sayigquma ngaphambili, sisakhono sokwenza oko setha kwakhona ibhlog yakho yeWordPress.
Enye into yokuba iindlela ezininzi zokuphucula ukhuseleko lwakho lwe-WordPress zibandakanya ukutshintsha ifayile ye-.htaccess ngokuthe ngqo, okanye ukusebenzisa inkqubo efanayo ye-FTP ukwenza utshintsho kwezinye iifayile zeengcambu. Ngamanye amagama, nje ukuba uqale ujonge kumantongomane kunye neebholithi zesiza sakho, uya kufumana amathuba amaninzi okwenza ulwenziwo kunye nokuphuculwa.
tags: Ukudluliselwa kwe-301kuvumelakhanyela kubo bonkeifayilezillaftp.htaccesshtaccess ifayilehtaccess ifayilematchhtaccess lungisa i-urlhtaccess ukubhala kwakhonaUkhuseleko lwe-htaccessumyalelo uyalaregexWordPressukhuphelo lwegama